किन बन्यो "रुद्रप्रिया" प्रतिक्षित चलचित्र ??? – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentकिन बन्यो “रुद्रप्रिया” प्रतिक्षित चलचित्र ???
कार्तिक २ गते यानिकी लक्ष्मी पूजाको दिन देखी प्रदर्शनमा आउने रेखा थापाको ‘रुद्रप्रिया’ निकै नै प्रतिक्षित चलचित्र बनेको छ । ।रेखा र आर्यन को जोडी आठ बर्ष पछी सँगै जोडीएको कारण पनि दर्शक यो चलचित्र हेर्न आतुर छन ।दर्शकहरुले यि दुईको केमेष्ट्री निकै रुचाउने गरेका थिए । ‘रुद्रप्रिया’ लाई सुदिप बबी भूपाल सिंह निर्देशन गरेका हुन् । फिल्ममा रेखा र आर्यनसँगै राजन इशान, टिका पहारी लगायत कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ ।